FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BEDLINGTON TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bedlington Terrier
Glenn, lehilahy Bedlington Terrier lahy 8 volana avy any Bedlington Village Northumberland
Lisitry ny alika Bedlington Terrier Mix
fandriana-ling-tuh n ter-ee-er
Ny Bedlington Terrier dia manana endrika zanak'ondry kely. Tery ny lohan'ilay alika miendrika poara, nefa lalina sy boribory. Mahery ny vavam-bolo ary tsy mijanona. Ny maso miendrika amandy dia kely sy matevina. Mihaona ny valanoranony amin'ny haavon'akanjo na hety. Ny sofina ambany dia miendrika telozoro miaraka amin'ny tendrony boribory. Lalina ny tratra ary arched ny lamosina. Ny tongotra aoriana dia lava kokoa noho ny tongotra mahitsy sy eo anoloana. Ny rambony dia ambany napetraka, matevina amin'ny fotony ary manidina amin'ny teboka iray. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny Bedlington dia manana palitao matevina matevina mifangaro volo mafy sy malefaka mitsangana avy amin'ny hoditra. Ny loko dia avy amin'ny manga, fasika, aty, manga sy manga, fasika sy volondavenona ary aty sy hoditr'omby. Ny marika tan dia mety hiseho eo amin'ny maso, amin'ny tratra, ny tongotra ary ny aoriana.
Ny Bedlington Terrier dia milalao, falifaly ary be fitiavana, manao namana tsara. Ny fitiavana ny ankizy sy ny fisakaizana amin'ny olon-tsy fantatra dia tsy fivadihana sy velona, ​​fa mety ho tonga fanahy iniana sy maditra raha mahatsapa izany malemy paika na mandefitra ny tompony . Mila mianatra mifanerasera ity karazana ity saka sy ny hafa biby an-trano rehefa tanora. Matetika izy ireo dia afaka mifanaraka alika hafa , fa ampanalaviro azy ireo izay te-hanjakazaka, toy ny fanamby taloha fa mpiady mampihorohoro izy ireo, na eo aza ny fisehoany malefaka. Matetika antsoina hoe 'herinaratra kely' izy io dia be herim-po sy matanjaka. Mpihady hafanam-po izy io. Mpihazakazaka haingana dia haingana izy ireo ary mila ampianarina hiverina rehefa nantsoina. Bedlingtons dia te-hiondrika, ary mila ilazana azy ampy dia ampy raha manjary manjavozavo loatra. Izy ireo dia mety ho avo lenta raha tsy ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana . Avelao ity karazana ity hitarika ny firarany amin'ny faritra mihidy. Toy ny Whippet , mailaka izy ary tia manenjika! Hamarino tsara fa ianao dia alika mafy orina sy matoky ary tsy miova mpitondra entana hialana Syndrome kely alika , ary fanahiana fisarahana .
Haavony: Lehilahy 16 - 17 santimetatra (41 - 43 cm) Vehivavy 15 - 16 santimetatra (38 - 41 cm)
Milanja: Lehilahy 18 - 23 kilao (8 - 10 kg) Vehivavy 18 - 23 kilao (8 - 10 kg)
Bedlington Terriers dia mety manana olana amin'ny aty nolovaina antsoina hoe Copper Storage Disease. Izy ireo koa dia mora voan'ny aretin'ny voa, ny PRA, ny tiroidan'ny tiroid ary ny aretin'ny maso, toy ny aretim-po sy aretin'ny retina.
Ity karazana ity dia tsy haninona ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany.
Ireto alika mavitrika ireto dia mila fanatanjahan-tena betsaka ary, toy ny terriers hafa, dia ho leo sy ho ratsy toetra tsy misy azy. Mila raisina izy ireo a dia an-tongotra lavitra isan'andro .
17+ taona ny vehivavy iray nilaza fa niaina 23 taona i Bedlington.
Alika kely 3 - 6
Ny palitao dia mandena kely tsy misy volo ary mitaky fikolokoloana manokana isaky ny enina herinandro, noho izany dia tsara kokoa angamba raha mianatra manao azy ianao. Kavina ny palitao ary aolaka eo akaikin'ny loha sy vatana mba hanasongadinana ny endrika. Sasao akaiky ny sofina avelao ny boribory eo amin'ny tendrony. Amin'ny tongotra, avela somary lava kokoa ny volo. Sasao tsy tapaka ny alika ary diovy ny fika ao anaty sofina. Na dia matetika aza ny fandroana matetika dia tsy ho maina ny hoditra toy ny karazany maro hafa, tsy tokony hosasana matetika loatra izy io na ho lasa lanka ny palitao, izay heverina fa tsy mety amin'ny karazany. Ny alika izay haseho dia mitaky haingo ambony kokoa. Ity karazana ity dia heverina ho tsara ho an'ireo marary allergy.
Ny Bedlington Terrier dia novolavolaina ary nomena anarana taorian'ny tanàna fitrandrahana ao Bedlington any amin'ny firenena Northumberland, England. Ny anarana tany am-boalohany ho an'ny Bedlington Terrier dia ny Rothbury Terrier, nantsoina taorian'ny distrikan'i Rothbury izay eo amin'ny sisintany anglisy. Tokony ho 1825, dia nomena anarana hoe Bedlington Terrier ilay karazana, taorian'ny Bedlington Mining Shire. Ny karazany dia alika mpihaza sarobidy amboahaolo, bitrodia ary bitika. Nampiasaina ho mpihaza vermin ihany koa ireo mpitrandraka ao Bedlington. Ireo mpitrandraka dia nanararaotra ny fahamendrehany ho toy ny alika mpiady ao anaty lavaka ary ampiasain'ny mpihaza azy ireo ho retrievers. Samy ny Otterhound SY Dandie Dinmont Terrier dia mety mpandray anjara amin'ny karazany. Ny mpiompy sasany, indrindra ireo any Angletera dia hiampita Bedlingtons miaraka aminy Whippets SY Greyhounds hamokatra izay antsoin'izy ireo Lurchers .
Failandy, CH Bedlington, tompon'ny sy tian'i, Ritva Kohijoki, sary natolotr'i Moonshadow Bedlington Terriers
omby alika omby omby mifangaro
Ilay printsy norvezianina! Alika Bedlington Terrier aty, sary nahazoana alalana avy amin'i Moonshadow Bedlington Terriers
Brenin the Bedlington tsara tarehy dia avy any amin'ny havoanan'i Ekosy
Brenin the Bedlington Terrier
Hijery ohatra hafa momba ny Bedlington Terrier
Bedlington Terrier Sary 1
Bedlington Terrier sary 2
Bedlington Terrier Sary 3
Bedlington Terrier Sary 4
Bedlington Terrier Sary 5
sarin'alika zanak'ondry mpiompy australianina kely indrindra
yorkie shih tzu afangaro alika kely amidy
Akita mpiandry ondry Zavatra husky Mix
heeler manga sisin-collie Aostraliana mpiandry ondry Mix